नेप्से साँढे पाँच अङ्कले घट्यो – Naulo News|online news|online news nepal
Home/समाचार/नेप्से साँढे पाँच अङ्कले घट्यो
काठमाडौँ,फाल्गुन २२– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार पनि ओरालो लागेको छ।
पछिल्ला केही दिनदेखि लागातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर कारोवार मापक नेप्से बिहीबार पनि ५.५० विन्दुले घटेर एक हजार ४३५.७० मा पुगेको हो ।
यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.१५ ले ओरालो लागेर ३०७.७२ मा पुगेको छ । नेप्से ओरोलो लागेपनि कारोवार रकम भने झण्डै अढाई अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
कूल १७९ कम्पनीको ५९ लाख ४० हजार ५३३ कित्ता शेयर रु. दुई अर्ब ४५ करोड ७० लाख ९३ हजार ४६३ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोवार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये विहीबार पाँच उपसमूहको शेयर बढेको छ भने सात उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ ।
विकास बैंक २१.२७, वित्त ७.८१, अन्य दुई, लघुवित्त ४८.०३, जीवन बीमा ७७.८५ ले वृद्धि भएको छ । यस्तै बैंकिङ १४.२४, व्यापार १७.७२, होटल २५.९८, जलविद्युत् ९.३१, निर्जीवन बीमा २५.६२, उत्पादन ३८.९५ र सामूहिक लगानी कोष ०.१४ ले घटेको छ ।
कारोवारका आधारमा बिहीबार पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्षस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु. ३७ करोड ८७ लाख १९ हजार ८६६ मूल्य बराबरको शेयर कारोवार भई शीर्षस्थानमा रह्यो ।
यस्तै एनएमबी बैंक रु. १२ करोड ६५ लाख ९२ हजार २२, एनआइसी एशिया बैंक रु. नौ करोड ६८ लाख ६ हजार, मञ्जुश्री फाइनान्स रु. आठ करोड ४२ लाख ३९ हजार ४३९, नबिल बैंक रु. छ करोड ५८ लाख ५३ हजार २९७ र हिमालयन डिस्टिलरीको रु. छ करोड ४४ लाख ८० हजार बराबरको कारोवार भई शीर्षस्थानमा रहे ।
कारोवारका आधारमा आज मञ्जुश्री फाइनान्स १०, राधी विद्युत् कम्पनी ९.०४, बोटलर्स नेपाल तराई, ८.२१, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त ७.०२, गणपति माइक्रोफाइनान्स ६.१६ र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ६.०१ प्रतिशतले कमाए ।
यसैगरी नेपाल हाइड्रो ९.६९, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर ९.३२, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.६७, यूनियन हाइड्रो ६.०६ र ओरियन्टल होटलका शेयरधनीले ४.६० प्रतिशतले गुमाए ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार, बेलुका जाउलो दिइने
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय